Kutheni usebenzisa amawele edijithali kulwakhiwo- iiGeofumadas
Kutheni usebenzisa amawele edijithali ekwakhiweni
Matshi, 2019 Zobunjineli, ezintsha
Yonke into esiyibonayo kuba digital. technologies Advanced ezifana ubukrelekrele iisoyi kunye Internet of Izinto (IoT) beba iindawo ezibalulekileyo kwishishini ngalinye, ukwenza iinkqubo ngokukhawuleza kwaye ngakumbi kakuhle ngokwemiqathango iindleko, ixesha nokulandeleka. Hambisa lwedijithali ukuvumela kwishishini ngalinye ukuphumeza ngaphezulu nge ngaphantsi; ubuncinane oku kuveza ifoun ufuna inkqubela zamvanje computing amandla kanye ubuchule ezikrelekrele, kunye nophuhliso lobugcisa abenzi boluvo, miniaturization, weerobhoti kunye drones, banceda nokuba ishishini lokwakha ndaqonda indlela zizidibanise yedijithali ngokwasemzimbeni ukwakha izakhiwo atshiphu, iluhlaza yaye Chrysalis ngaphantsi ngexesha indalo.
Umzekelo woku yindlela iidrones ezivumela ngayo ukubanjwa kwenani elikhulu leefoto ngexesha elifutshane, ukwenza umsebenzi wokucwangcisa ube lula. Kodwa ayisiyiyo loo nto kuphela, kuba kuxhomekeke kwisenzisi esinayo i-drone, idatha ngaxeshanye inokufunyanwa kunye neempawu ezibonakalayo ezinokumodareyitha ezinika ixabiso elongezelelekileyo kwifoto yolwelo elula. Olu luvo luyabuguqula ngokwenyani ubuso beshishini le-AEC kukuba "ngamawele edijithali" kunye nemizekelo yakutshanje yenyani eqinisekisiweyo evela kubungqina beHololens2 bokuba siya kuba nokuninzi koku ngaphaya komzi mveliso wokuzonwabisa.
Ngokwemibiko yeGartner yakutshanje, umzila we "Digital Twin" usondela kwi "Peak of expectation". Yintoni enye? Phakathi kwe-5 ukuya kwi-10 iminyaka, umkhanyo kulindeleke ukuba ufinyelele kwi "Platau yeZiphumo".
Umjikelezo we-Gartner ujikelezo lwezobuchwepheshe obusakhulayo 2018
Iyiphi idayini yedijithali?
Iwele ledijithali libhekisela kwimodeli ebonakalayo yenkqubo, imveliso okanye inkonzo. Idijithali yedijithali inxibelelwano phakathi kwenjongo yehlabathi yangempela kunye nokumelwa kwayo kwedijithali eqhubekayo isebenzise idatha yolwazi. Yonke idatha ivela kwiintsholongwane ezisemgangathweni. Ukubonakaliswa kwedijithali kusetyenziswa ukuboniswa, ukulandelelanisa, ukuhlalutya, ukulinganisa kunye nocwangciso olongezelelweyo.
Ngokungafaniyo nemodeli ye-BIM, iwele ledijithali alinyanzelekanga ukuba lisebenze ngento enommelo wendawo. Umzekelo, inkqubo yentengiselwano, ifayile yomntu, okanye iseti yobudlelwane phakathi kwabachaphazelekayo kunye neeyunithi zolawulo.
Ewe iwele ledijithali leziseko zophuhliso lelona linomtsalane, ubuncinci kwicandelo lobunjineli beGeo. Ngokwenza iwele ledijithali yesakhiwo, abanini bezakhiwo kunye nabaqhubi banokuthintela iingxaki ezininzi ezenzeka ngaphakathi kwisakhiwo, zamkele iindlela zokwenza, kwaye ngenxa yoko zibe nezakhiwo ezikhuselekileyo. Umzekelo, unokwenza iwele ledijithali lesakhiwo kwaye ujonge indlela eza kusabela ngayo kwinyikima enkulu. Kuxhomekeke kwisiphumo, ungenza utshintsho oluyimfuneko kwisakhiwo, ngaphambi kokuba intlekele ihlasele kwaye izinto zingalawulwa. Yile ndlela iwele ledijithali yesakhiwo elinokubusindisa ngayo ubomi.
Umfanekiso ngokufanelekileyo: isakhiwoSMARTIn Summit 2019
Amawele adijithali avumela umyili wezakhiwo ukuba abe nolwazi olunxulumene nesakhiwo esifumaneka ngexesha langempela, edibene nefayile yobomi ebandakanya umklamo, ukuyila, ukwakhiwa, ukugcinwa kunye nokusebenza kweefa. Inika ukufikelela ngokukhawuleza kuwo onke ulwazi malunga nesakhiwo sokwakha. Inceda abakhi ukuba bahlale beqinisekile malunga nezinto ezincinci, njengemilinganiselo efunekayo yesigxobo.
Njengoko kutshanje kwabiwe nguMark Enzer, CTO, MottMacDonald kwiSakhiwo se-SMART Isi2019 isakhiwo, xa uthetha malunga nobukhulu bamawele edijithali ukuhlaziywa; "Akukona ngexesha langempela, lixesha elifanelekileyo."
Iinjongo zokusetyenziswa kwamawele edijithali ekwakhiweni.
Ukusetyenziswa okufanelekileyo kwethekhnoloji kwisoloko yenza iinkqubo ziphumelele. Ngokomzekelo, amawele adijithali, ngokuvumela imimiselo ukuba ibe namandla okuqhuba umonakalo obangelwa yintlekele yendalo kunye neyabantu. Banokunceda abemi bekhokelela ubomi obukhuselekileyo. Ngokomzekelo, kwimeko yeziseko-mhlaba apho kufuneka ukuba ininzi yezothutho, ngokusebenzisa ukusetyenziswa kweprojekthi yezenzululwazi zokuhamba, sinokuqikelela ukuba kuza kubakho ukudibanisa nini kwaye kuphi. Ngokusungula utshintsho olufunekayo kwimodeli yedijithali yeziseko, kunokwenzeka ukuba kufikeleleke ukhuseleko olukhulu, ukusebenza kakuhle kunye neendleko zokusebenza eziphantsi ekwakheni nasekugcinweni kwexabiso.
Iintlobo zokusebenzisa amawele edijithali ekwakheni zininzi. Ezinye zazo zichazwe ngezantsi:
Ukubeka esweni rhoqo inkqubela phambili yokwakha.
Ukubekwa esweni kweso sakhiwo sokwakha ngedatha yedijithali kukuqinisekisa ukuba umsebenzi ogqityiweyo uhambelana nezicwangciso kunye neenkcukacha. Ngamawele adijithali, kunokwenzeka ukulandelelanisa utshintsho kwimodeli njengoko lwakhiwe, imihla ngemihla kunye neyure, kwaye xa kukho naluphi na uphambuko, kuthathwa inyathelo elikhawulezayo. Ukongeza, imeko yekhonkrithi, ukuchithwa kwiikholomu okanye nayiphi na indawo yokufuduka kwezinto kwiziko lokwakha iyakwazi ukuqinisekiswa ngokulula kwi-twin yedijithali. Ukufumana okunjalo kukhokelela ekuhloleni okuthe xaxa kunye neengxaki zifunyenwe ngokukhawuleza, ezikhokelela kwizicombululo ezingakumbi.
Ukusetyenziswa ngokufanelekileyo kwezibonelelo.
Amawele adijithali abakhokelela ekunikezelweni okungcono kwezibonelelo kwaye uncede iinkampani ziphephe ukulahlekelwa ixesha lokuvelisa ekuhambeni nasekuphatheni izinto eziyimfuneko. Ngokusebenzisa le teknoloji, isabelo esiphezulu singagwenywa kwaye kulula kwakhona ukuchaza kwangaphambili izinto ezifunekayo kwisayithi.
Kwaye ukusetyenziswa kwezixhobo kunokulandelwa kwaye ingasetyenziswanga ingakhululwa ngeminye imisebenzi. Oku kusindisa ixesha nemali.
Ukukhuselwa kukukhathazeka okukhulu kwiindawo zokwakha. Amawele adijithali, ngokuvumela iinkampani ukuba zilandele abantu kunye neendawo eziyingozi kwisayithi yokwakha, zincede ukuphepha ukusetyenziswa kwezixhobo ezingaphephile kunye nemisebenzi kwiindawo eziyingozi. Ngokusekelwe kwimiba yenkcazelo yangempela, iprogram yesaziso sokuqala ingaphuhliswayo evumela ukuba umphathi wokwakha ukwazi ukuba umsebenzi wasentsimini uhlala kwindawo engaphephile. Isaziso sinokuthunyelwa kwisicatshulwa esisebenzayo sokuthintela ingozi yokuvela.
Iintlobo zokusebenzisa i-digital twin technology kwizakhiwo zininzi. Imikhwa emidala ikhuni, kodwa ukufezekisa kakuhle ukusebenza ekwakhiweni, kuyimfuneko ukuba uye kwidijithali. Ukusetyenziswa kweteknoloji ye-twin yezobuchwepheshe kunokuzisa izinto ezintsha ekuphuhliseni izibonelelo kunye nokuzisa umgangatho kunye nokusebenza kakuhle kwiindawo eziphakamileyo. Ishishini kufuneka silungiselele kwaye silungele ukutshintsha kwendawo yedijithali!
Sibe nethuba lokwenza udliwanondlebe noogxa baseBrazil kunyaka ophelileyo, eLondon. Ngokusebenzisa iwele ledijithali, iRhuluneli yaseBrazil uJosé Richa Airport (SBLO), isikhululo seenqwelomoya sesine ngobukhulu emazantsi eBrazil sikwazi ukulawula idatha yesikhululo seenqwelomoya kwaye siphumelele ngokukuko ekusebenzeni kwayo.
Ukuziva imfuneko kangcono data lo moya, umsebenzisi moya i SBLO, Infraero wagqiba ukwenza liwele lwedijithali ukuba isebenze njenge enemingxuma bobukho yokugcina esembindini kumntu wonke data moya, kubandakanywa izibonelelo, izakhiwo, iindlela zokwakha , amaziko kunye neemephu kunye nedatha yolawulo.
I-BIM kunye ne-GIS kunye nezicelo zeBentley zazisetyenziselwa ukubonakalisa izibonelelo ze-20 ezikhoyo, ezibandakanya ngaphezu kwe-920,000 metres square square surface. Baye bahlengahlengisa i-take-off kunye ne-landing runway, ii-yards ezimbini kunye neendlela zeeteksi kunye neendlela zokufikelela. Iqela leprojekthi lide lenza idatha ye-parametric ukuxhasa ukucwangciswa nokuphucula ulawulo lweprojekthi.
Iqela leprojekthi ladala idijithali yedijithali yesikhumulo sezindiza esiquka isikhokelo senqwelo-moya kwisikrini kunye nendawo yokugcina kuyo yonke idatha yeedrafti. Ingqolowa ephakathi ikunceda abasebenzisi ukuba bachane ngokuchanekileyo indawo yeenkqubo ngaphakathi kwesikhululo sesikhululo se-moya, ukuphucula ulawulo lwezorhwebo ngokusebenza ngokukhuselekileyo nangokufanelekileyo. Iwele ledijithali iya kuhlengahlengisa zonke iiprojekthi zeprojekti zangaphakathi zezaphambili zangaphakathi, kwakunye neenkqubo zokucwangcisa nokulawula. Ngoncedo lwewele ledijithali, i-Infraero inokunciphisa iindleko zokugcina kunye nokufezekisa ukusebenza kwe-airport ye-SBLO. Iqela leprojekthi lilindele ukulondoloza ngaphezu kwe-BRL 559,000 ngonyaka ngewele layo ledijithali. Umbutho ulindele kwakhona ukunyuka kwenzalo yayo.
IprojekthiWise isetyenzisiwe ukudala ipolatifti yokuhlanganiswa kwesikhokelo sebhola, eyasebenza njengommandla wolwazi oluxhunyiwe kwiprojekthi. Ubungakanani bokungeniswa kwefayili ye-MicroStation livumele iqela ukuba lidale igridi yangempela kuzo zonke izakhiwo zeesikhululo se-asethi zisebenzisa amafu. OpenBuildings uMyili (ngaphambili AECOsim Building uMyili) wancedisa ekuyileni ulungise iilayibrari amaziko kwisikhululo seenqwelo-moya, kukhombisa terminal umkhweli, terminal imithwalo, isikhululo umlilo kunye nezinye izakhiwo ezikhoyo. Iqela lisebenzisa i-OpenRoads ukwenza iprojekti yejometri kunye nebalazwe yomhlaba wendlela yeendlela ezihamba ngeendlela zokuhamba, iindlela zeeteksi kunye neenkonzo.
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-Oracle nguMxhasi oManyeneyo kwiQonga leHlabathi le-Geospatial ye2019
Post Next #GeospatialByDefault-Iforum yeGeospatial 2019Okulandelayo »